Micnaha iyo astaamaha taatikada ubaxa | Tattoo
Irene Rubio Gregorio | | Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta
Markii aan ka hadlayno tattoos ubax, kuwa ugu horreeya ee maskaxda ku soo dhaca ayaa ah ubax. Waa tattoo noocan ah heer sare par. Si kastaba ha noqotee, sidan waxaan ilaawnaa inay jiraan dad kale oo badan oo leh calaamado aad u kaladuwan oo muhiim ah. Sidaa darteed, maanta waxaan kuu soo bandhigayaa soo bandhigida astaamaha lily.
Ubax waxay leedahay halyeey dheer oo ka dambeeya. Xaqiiqdii, waxaa la sheegaa inay yihiin dhirta sida aadka ugu dhow khuraafaadka. Tusaale ahaan, Griigga, ubaxyada cad ee ubaxa waxaa laga sameeyay dhibco caano ah oo ay soo shubtay ilaahadda Hera intaad nuujinayso.
Si kastaba ha noqotee, Roomaanka, ubaxuna wuxuu ahaa ubaxa dhimashada: Ilaahadda Roman-ka ee Iris waxay la qaadatay geedkan iyada oo gacan ka geysaneysa sidii naf loogu qaadi lahaa dunida kuwii dhintay.
Dhinaca kale, wargeysyada (farshaxanka sharraxaya tirooyinka, calaamadaha ama qaybaha gaashaan), la fleur de lis waa matalaad ubax.
Ku saabsan astaamaha dhirta, Fiiriya ubaxyadu waxay metelaan seddex dhinac: naagnimada, jacaylka, iyo daahirnimada. Waxay yihiin tattoos aad loogu qoondeeyay haweenka, in kastoo aysan ku koobnayn iyaga. Si kastaba ha noqotee, waxaas oo dhami waxay kuxiran yihiin midabka caleenta shaybaar kasta.
2 Casaan iyo guduud
Midab cad astaan ​​u yahay daahirnimo, daahirnimo, eed la'aan. Sababtaas awgeed, ubaxyada cad waxay la xiriiraan Maryantii bikradda ahayd. Fiiriya ubaxyada midabkan ayaa siweyn loogu isticmaalaa xafladaha aroosyada, labadaba macnahooda iyo quruxdooda.
Casaan iyo guduud
Fiiriya ubaxyada guduud, iyo kuwa guduudka ah, Iyagu waa astaanta lammaanaha jacaylkooda ugu noolaada si dab leh. Ubax cas, midab dhaqan ahaan ku xirnaa jacaylka ugu daacadsan, ayaa wehel wanaagsan u ah daqiiqadaha muhiimka u ah xiriirka, sida Maalinta Jacaylka. Dhinacooda, ubaxyo guduudan ayaa loo isticmaalay inbadan si loogu qurxiyo qolka malabka.
Ubaxyada liinta ah waxay dib ula soo noqdaan jacayl gubanaya oo qiiro badan. Si kastaba ha noqotee, xaaladdan, lamaanaha waxay ka kooban yihiin dhalinyaro jecel.
Ubaxyada midabada leh ee casaanka ah, sida ku dhowaad ubax kasta oo kale oo midabkan leh, waxay matalayaan saaxiibtinimo iyo cibaado. Bixinta ubaxani wuxuu u dhexeeyaa asxaabta leh daacadnimo iyo wada shaqeyn buuxda.
Midabka huruudda ah ee ubaxyada waxay u taagan tahay farxad, tamarta xiriirka. Xiriirkani markasta ma ahan mid isjecel, laakiin wuxuu kaloo noqon karaa mid u dhexeeya asxaabta ama qoyska.
Lily buluug wuxuu metelaa kalsooni, daacadnimo iyo jacayl. Sidii tii hore, suurto gal maahan oo keliya inaad kalsooni ku qabtid lammaanahaaga, laakiin sidoo kale saaxiibbadaada ama qoyskaaga.
Si kastaba ha noqotee, cakirnaanta midabada tattoo Waxay ka dhigan tahay markii mid ka mid ah ubaxyadan la sawiray, in dhammaan fursadaha aan laga fikireynin.
Hagaag, waad ogtahay, haddii aad waligaa rabto inaad hesho tattoo ubax, ka feker tattoos-ka ubaxyada lily. Midabkee dooran lahayd?
Wadada buuxda ee maqaalka: Tattoo » Noocyada Tattoo-ka » Tattoos ee Ubaxyada iyo Dhirta » Micnaha iyo astaamaha taatikada ubaxa
Tattoos fudud laakiin aad u xiiso badan